मलाइकासंगको ब्रेकअपको चर्चाकाबीच अर्जुन कपुरले खोले मुख, के हो वास्तविकता ? – American Nepali News
January 13, 2022 adminLeaveaComment on मलाइकासंगको ब्रेकअपको चर्चाकाबीच अर्जुन कपुरले खोले मुख, के हो वास्तविकता ?
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता अर्जुन कपुर र मलाइका अरोराको ब्रेकअपको अफवाह सामाजिक सञ्जालमा घुमिरहेको छ । यसैबीच, अभिनेताले आफ्नी प्रेमिकासँग मिरर सेल्फी पोस्ट गरेर सबै अफवाहको अन्त्य गरेका छन्। अर्जुन कपुरले एउटा ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट तस्बिर सेयर गरेका छन्, जसमा दुवै एकदमै ड्यापर लुकमा देखिएका छन् । चश्मा लगाएर, दुवै ऐनामा पोज दिइरहेका छन्।
अर्जुन कपुरले सेयर गरेको तस्विरको क्याप्शनमा उनले फ्यानलाई आफू अझै मलाइका अरोरासँग रहेको स्पष्ट पारेका छन् । दुई छुट्टिएका छैनन् । अर्जुनले लेखेका छन्, ुअफवाहको लागि कुनै ठाउँ छैन। सबैजना सुरक्षित रहनुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्। मानिसहरूको स्वास्थ्यको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। म तपाईं सबैलाई धेरै माया गर्छु।ु अर्जुन कपूरको यो पोस्टमा फ्यान र सेलिब्रेटीहरूले प्रतिक्रिया दिएर मायाको वर्षा गरिरहेका छन्।
केही दिनअघि अर्जुन कपूर आफ्नी बहिनी रिया कपूरको घरमा डिनरको लागि गएको खबर आएको थियो । मलाइका अरोरा जहिले पनि अर्जुनको परिवारसँग डिनर पार्टीमा सहभागी हुने भएपनि यसपटक उनी यो डिनरमा सहभागी भएकी छैनन् । त्यसयता यी दुईको ब्रेकअपको चर्चा चर्किएको थियो । यसपछि अर्जुन कपुरमा कोभिड देखिएको थियो, जसका कारण उनी घरमै क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । अहिले अर्जुन पूर्णतया स्वस्थ छन् र उनको रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको छ ।
मलाइका अरोरा प्रायः मुम्बईमा देखिन्छिन् । उनी केही दिनदेखि घरबाट बाहिर निस्केकी छैनन्, त्यसपछि मलाइका ब्रेकअपका कारण निकै त ना वमा छिन् र आफूलाई घरमै आइसोलेसनमा राखेको खबर आएको छ । उनी कसैसँग धेरै बोल्दैनन् । मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि उनले आफूलाई घरमै कै द गरेकी छन् । मलाइकाको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपनि अर्जुनको पोष्टबाट यी दुई अलग नभएको स्पष्ट हुन्छ । सँगै छन्।
बलिउड अभिनेता अर्जुन कपुर र मलाइका अरोरालाई इन्डस्ट्रीको सबैभन्दा मनपर्ने जोडी मानिन्छ । उनीहरुको प्रेमको खबर सुनेर फ्यानहरु निकै खुसी भएका छन् । यी दुईलाई पटक पटक सार्वजनिक रुपमा सँगै देखिएका छन् । दुबैको रोमान्टिक स्टाइल धेरै लंच र डिनर पार्टीहरूमा देख्न सकिन्छ। तर, केही समयअघि दुवैले उमेरको अन्तरलाई लिएर कमेन्ट गर्ने ट्रोललाई जवाफ दिएका थिए । दुबैले आफुलाई कसैको वास्ता नगरेको बताएका छन् । अहिले दुवैले छुट्टिएको खबर बाहिरिए पछि उनीहरुको फ्यानलाई भने दुखी बनाएको थियो ।
आयल निगमले फेरी बढायो मुल्य, कुन-कुन इन्धनको बढ्यो भाउ ?